Okwamanje Ungadla Japan athandwa kakhulu phakathi izingane kanye nabantu abadala emhlabeni wonke. Lezi amaswidi banomlando ukuthi usukela iminyaka eminingi.
Provenance vkusnyashek Japan
EJapane, ukwenza uphudingi amakhulu eminyaka - ngisho nangaphambi ushukela baba etholakalayo kuleli zwe. Lona engeniswa kuleli abahwebi-Portuguese ngekhulu le-16. Kwaphela iminyaka eminingi ngemva kwalokho ushukela uyaqhubeka ukuba umkhiqizo ezingavamile futhi ezibalulekile. EJapane, siye ithuthukiswe abe noshukela onambitheka ngendlela eyingqayizivele, ayesekelwe izithako ezitholakalayo, ezifana ilayisi nobhontshisi amnandi. Kusukela 1860s kuleli zwe, ezihlukahlukene enkulu vkusnyashek ezisekelwe emasikweni Western. Baye bathatha ukuma ezithakazelisayo, ukunambitheka zashintsha njengoba isikhathi siqhubeka.
1. Sakuro Moti.
Sweet mochi pink (irayisi amakhekhe), egcwele obomvu emabhontjisi unama camera cherry leaf (sakura).
Konpeitō - round ezinemibala amaswidi kancane wenza ushukela okumsulwa.
4. UJosefa Souham.
Joseph Souham - dessert eyenziwe kafulawa irayisi kanye noshukela. Ukuze ukulungiselela esetshenziswa yayo ukudla obomvu Umbala ngaphandle nangaphakathi ubumnandi uhlala emhlophe. Limele Japan. Nokho, ungakwazi ukuhlangabezana kaningi dessert pink nomhlophe.
Vasanbon - candies colorful. Zenziwa kusukela nepepper kakhulu yasekhaya (Japanese) ushukela. Domestic imikhiqizo yezolimo ibiza kakhulu ukwedlula ukungeniswa. ushukela Local kungadla izikhathi 10 ngaphezulu kuyabiza kuka amazwe. It isetshenziswa ukudala imikhiqizo ekhethekile, njengemishado Vasanbon.
Uyro - bendabuko Japanese umusi amakhekhe. Ziyakwazi ukunambitheka Chewy futhi kancane elimnandi. Pies Uyi amakha itiye eliluhlaza, sitrobheli onsundu.
Sweet obomvu emabhontjisi nokunamathisela ngaphakathi ipuleti ecolekile.
Yōkan kuyinto jelly izithelo candy ubhontshisi obomvu kanye noshukela.
Dango - irayisi amabhola, threaded ku uhlomo futhi ofakwe ushukela isiraphu.
Higashi - kukhona Ungadla encane evela eJapane, okuyinto zingenalo izithako fresh. Ngamanye amazwi, ukuphila kwabo eshalofini eside. Lokhu encane, ezimibalabala, candy aesthetically eyenziwe ochotshoziwe ushukela Japanese noma ufulawa wesoya.
Manju kukhona namabhanisi - kunamakhulu izinhlobo. Ngokuvamile kuba roll nge ukuthungwa okunamathelayo, egcwele nokunamathisela amnandi (ANCO). Manju walethwa kusuka China e 1341 kanye inomlando omude eJapane.
Njengoba sekunama-ushukela eJapane uye wahlakulela uhlelo art enjalo, kufana nokukhipha candy. Candies enziwa ukuma izilwane. Uma uthi nhlá, lena sibalo ezivamile futhi ifomu cocks yethu, okuyinto ingalungiswa ekhaya usebenzisa kwetinhlobo letikhetsekile. Kodwa ukuze senze candy-Japanese, kuzomele ube amakhono athile. Okwamanje eJapane, zikhona izitolo eziningi lapho wena unethuba lokuba ukuthenga lokhu ubumnandi engavamile, okuyinto zenziwa ngobuchwepheshe ekhethekile.
Thenga vkusnyashek Japan
Manje kulula kakhulu ukuthenga noma iyiphi imikhiqizo wayefisa ilanga liphuma ezitolo ezikhethekile noma ngaphambilini ku-intanethi. Ungadla Japan yatha- omkhulukazi phakathi izingane kanye nabantu abadala. Baziwa emhlabeni wonke.
Esikhathini esitolo inthanethi ungakwazi oda kits waseJapane. Ungadla, afakiwe nase-kits, ezihlukahlukene. Lapho ungathola candy eshalofini, okumnandi marmalade Japanese, amabhisikidi, irayisi crackers, lwebhece izinti, ushokoledi nokunye okuningi.
Vitamin ukwakheka kanye izakhiwo ewusizo nectarine
Dzhenifer Eniston: Ukudla mhlophe
"Jermuk" - manzi aveza impilo
I-convection ku-microwave: iyini? I-oven microwave ne-convection ne-grill